We She Me: ကလေးနဲ့ လေယာဉ်စီးခြင်း
nu-san - 10/30/07, 2:40 PM
Andy တို့ မိသားစုလေး အခုလို အဆင်ပြေပြေနဲ့ အိမ်ပြောင်းရွှေ့လို့ရသွားတာ ပျော်စရာကြီးပဲ.. ဟုတ်တယ်နော်. ခလေးပါရင် တော်တော် ဂရုစိုက်ရမယ်။ လူကြီးချည်းပဲ လေယာဉ်နဲ့ ခရီးသွားရင်တောင် အတော်ပင်ပန်းတာ ခလေးနဲ့ဆိုတော့ ပိုဆိုးပေါ့.. စာဖတ်ရင်းနဲ့ လေယာဉ်ပေါ်မှာ အမေရာ သမီးရော အနေခက်မှာပဲလို့ တွေးမိသေးတယ်။ နောက်ဆိုရင် အော်ဇီက သမီးတုန်အကြောင်းကို စောင့်ဖတ်ရတော့မှာပဲ.. :)
Phyo Wai Kyaw - 10/31/07, 11:59 AM
Wow and your family follow to you so early. dude, I am very glad to read this. ;)